၅၀၅(က)နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့ အူဝဲတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြောပြလာတဲ့ မေတိုးခိုင်…. – Cele Oscar
၅၀၅(က)နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့ အူဝဲတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြောပြလာတဲ့ မေတိုးခိုင်….
July 3, 2021 By L YC Celebrity
မတရား ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျး ထားခံရတာကနေ လှတျမွောကျလာပွီး ပွတေီဦး နှငျ့ အိနွာကြျောဇငျ တို့ အကွောငျးကို ပွောပွ လာခဲ့တဲ့ မတေိုးခိုငျ ပရိတျသတျကွီးရေ အနုပညာရှငျတှေ အမြားစုက မွနျမာ့ အရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပရိတျသတျတှနေဲ့ အတူ အပွညျ့အဝ ရပျတညျခဲ့ကွပါတယျ ။သူတို့ရဲ့ အောငျမွငျ ကြျောကွားမှုတှကေို ခနထားပွီး ပွညျသူတှနေဲ့ တဈသားတညျး လမျးမပျေါ အထိထှကျပွီး ဆန်ဒ ထုတျဖျောခဲ့ကွတာပါ ။ထို့အပွငျ သူတို့ရဲ့ အကောငျ့တှကေနလေညျး အစှမျး ကုနျ နေ့ ရောညပါ speak out တှလေညျး လုပျ ခဲ့ ကွ ပါ တယျ ။
ဒါ့ကွာငျ့ လညျး ပုဒျမ (၅၀၅-က) နဲ့ တရား စှဲဆိုခံ ရသူတှေ ရှိသလို တဈခြို့ နာမညျကွီး အနုပညာရှငျတှဆေို ကံမကောငျးစှာနဲ့ပဲ ဖမျးဆီး ခံခဲ့ကွပါတယျ ။ဇှနျလ (၃၀) ရကျနေ့ မနကျ အစောပိုငျး လောကျမှာ တော့ ထိနျးသိမျး ခံထား ရတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ အပွငျ အခွား နိုငျငံရေး သမားမြားကို လှတျပေးမယျ ဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျရှိခဲ့ပါတယျ ။အားလုံးကလညျး ရငျခုနျစှာနဲ့ စောငျ့နခေဲ့ကွသလို တဈခြို့ ဆို လှတျပေးမယျ့ နာမညျစာရငျးတှပေါ ကွို သိ နေ ကွ သ လို ပို တောငျ ရငျခုနျ နကွေ တာ တှေ ရှိ နပေါ တယျ ။
တဈမနကျလုံး အားလုံး မြှျောလငျ့ စောငျ့စားနကွေတဲ့အတိုငျး မတေိုးခိုငျ တော့ ပွနျလညျ လှတျမွောကျလာပွီး အိမျပွနျ ရောကျနပွေီ ဖွဈကွောငျး သိ ရှိ ရ ပါ တယျ ။ဒါပမေယျ့ ဦးတီ နဲ့ အူဝဲ တို့ နှ ဈယောကျ ပွနျလညျ လှတျလာ ခဲ့ခွငျးမရှိပမေယျ့လညျး အထဲရောကျနတေဲ့ ဦးတီနဲ့ အူဝဲ တို့ရဲ့ အခွအေနကေို အခုလို ပွောပွထားပါတယျ။ပရိတျသတျကွီး အားလုံး ကွားထားဖူးတဲ့ အတိုငျးနှဈယောကျလုံး ကနျြးကနျြးမာမာ ရှိပါတယျ ။ တူလေးနဲ့တူမလေးကို လညျးစိတျမခြ ပဲ စိတျပူပွီး သတိရနကွေပါတယျ။
အနညျးငယျ တငျးကပျြပမေယျ့ လညျးစိတျပူရလောကျတဲ့ အထိအခွအေနေ မဆိုးတာမို့ အားလုံး စိတျအေးအေး နဲ့ ဦးတီနဲ့ အူဝဲတို့ရဲ့ ပွနျလာတာကိုစောငျ့ ပေးကွပါနျော ဆိုပီး ပွောပွထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။မိသားစုနဲ့ ထပျတူဝမျးသာ ပြျောရှငျမိတာကွောငျ့ ပရိတျသတျကွီးအတှကျ သတငျး ကောငျးလေးကို ပွနျလညျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။အခုလို ဝငျရောကျဖတျရှု့ပေးကွတဲ့ ပရိတျသတျ တဈယောကျခွငျးစီတိုငျး ကနျြးမာပြျောရှငျသောနရေ့ကျမြား ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မတရား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ထားခံရတာကနေ လွတ်မြောက်လာပြီး ပြေတီဦး နှင့် အိနြာကျော်ဇင် တို့ အကြောင်းကို ပြောပြ လာခဲ့တဲ့ မေတိုးခိုင် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အနုပညာရှင်တွေ အများစုက မြန်မာ့ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အတူ အပြည့်အဝ ရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ် ။သူတို့ရဲ့ အောင်မြင် ကျော်ကြားမှုတွေကို ခနထားပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း လမ်းမပေါ် အထိထွက်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ ။ထို့အပြင် သူတို့ရဲ့ အကောင့်တွေကနေလည်း အစွမ်း ကုန် နေ့ ရောညပါ speak out တွေလည်း လုပ် ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ။
ဒါ့ကြာင့် လည်း ပုဒ်မ (၅၀၅-က) နဲ့ တရား စွဲဆိုခံ ရသူတွေ ရှိသလို တစ်ချို့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဆို ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ကြပါတယ် ။ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့ မနက် အစောပိုင်း လောက်မှာ တော့ ထိန်းသိမ်း ခံထား ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ အပြင် အခြား နိုင်ငံရေး သမားများကို လွှတ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။အားလုံးကလည်း ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်နေခဲ့ကြသလို တစ်ချို့ ဆို လွှတ်ပေးမယ့် နာမည်စာရင်းတွေပါ ကြို သိ နေ ကြ သ လို ပို တောင် ရင်ခုန် နေကြ တာ တွေ ရှိ နေပါ တယ် ။
တစ်မနက်လုံး အားလုံး မျှော်လင့် စောင့်စားနေကြတဲ့အတိုင်း မေတိုးခိုင် တော့ ပြန်လည် လွှတ်မြောက်လာပြီး အိမ်ပြန် ရောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိ ရှိ ရ ပါ တယ် ။ဒါပေမယ့် ဦးတီ နဲ့ အူဝဲ တို့ နှ စ်ယောက် ပြန်လည် လွတ်လာ ခဲ့ခြင်းမရှိပေမယ့်လည်း အထဲရောက်နေတဲ့ ဦးတီနဲ့ အူဝဲ တို့ရဲ့ အခြေအနေကို အခုလို ပြောပြထားပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံး ကြားထားဖူးတဲ့ အတိုင်းနှစ်ယောက်လုံး ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိပါတယ် ။ တူလေးနဲ့တူမလေးကို လည်းစိတ်မချ ပဲ စိတ်ပူပြီး သတိရနေကြပါတယ်။
အနည်းငယ် တင်းကျပ်ပေမယ့် လည်းစိတ်ပူရလောက်တဲ့ အထိအခြေအနေ မဆိုးတာမို့ အားလုံး စိတ်အေးအေး နဲ့ ဦးတီနဲ့ အူဝဲတို့ရဲ့ ပြန်လာတာကိုစောင့် ပေးကြပါနော် ဆိုပီး ပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းသာ ပျော်ရွှင်မိတာကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် သတင်း ကောင်းလေးကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။အခုလို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။